Jackal ( 2012 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel July 06, 2016
ဒီ​ဇာတ်​လမ်း​လေးကို​တော့ မင်းသား​ချော Jae Joong နဲ့ Jumong , Princess Hours , Emergency Couple , Running Man , A Frozen Flower အစရှိသည့်​ Movie နဲ့ TV Show ​တွေမှာ ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ နာမည်​​ကြီး မင်းသမီး Song Ji-hyo တို့ ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ Action , Comedy ဇာတ်​ကား​လေးတစ်​ခုပါ ...
ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းအရ Jackal ဆိုတာ လူသတ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းတော်ပြီး ရဲတွေတောင် ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိလို့ မဖမ်းနိုင် တဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက် ... နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Choi Hyun ကိုသတ်ဖို့အတွက် Jackal ကိုငှားခဲ့ပြီး ... တခြားတဖက်မှာလည်းရဲတွေက သဲလွန်စရကာ Jackal နောက်ကိုလိုက်နေကြပုံကို ဟာသ​နှောပြီး ရိုက်​ကူးထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​လေး တစ်​ကားပါ ..
နောက်ဆုံးမှာ Jackal လွတ်သွားမှာလား .. ?
Choi Hyun ကရော ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ .. ?
သူ့ကို သတ်ချင်နေတဲ့နောက်ထပ် လူသတ်သမားကရော ဘယ်သူလဲ ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို​တော့ " Jackal " ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်​ကား​လေးကို ကြည့်​ရှုပြီး ခံစားကြည့်​လိုက်​ပါဦး​နော်​ ... ?
IMDB အ​နေနဲ့က​တော့ 5.2/10 သာ ရရှိခဲ့​ပေမယ့်​လဲ Korea ကား သိပ်​မကြည့်​ဖြစ်​တဲ့ Admin ကျွန်​​တော်​ ​တောင်​ ကြည့်​ပြီးခွီ​နေရပါတယ်​ ... ​
Translator : Thae Thae
720p Download on pcloud ( 807.1 MB )
Action Comedy Korea
Labels: Action Comedy Korea